Hlola iDenmark - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eDenmark
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eDenmark
Bukela ividiyo mayelana neDenmark
Hlola iDenmark, a izwe eScandinavia. Ingxenye enkulu yayo yiJutland, inhlonhlo esenyakatho ne Germany, kodwa futhi nangeziqhingi eziningi, kufaka phakathi ezimbili ezinkulu, i-India ne-Funen, oLwandle i-Østersøen phakathi kweJutland neSweden.
Lapho isihlalo saseVikings futhi kamuva sasingamandla amakhulu asenyakatho yeYurophu, iDenmark ivele yaba yisizwe sesimanje, esichumile nesibamba iqhaza ekuhlanganeni okujwayelekile kwezepolitiki kanye nakwezomnotho eYurophu. Kodwa-ke, izwe liphume ezingxenyeni zeSivumelwano seMaucicht sase-European Union, uhlelo lwezezimali lwaseYurophu (i-EMU) nezinkinga eziphathelene nezindaba ezithile zangaphakathi.
IDenmark futhi indawo yokuzalwa enye yamathoyizi aziwa kakhulu emhlabeni, uLego. Ayikho enye indawo engcono emhlabeni lapho umuntu angathenga khona izitini zeLego ukwedlula endaweni yaseLegoland theme park eBillund.
Namuhla iDenmark ngumphakathi ovame ukubonwa njengophawu lwentuthuko; nezinqubomgomo ezithuthukayo zenhlalo, ukuzibophezela enkulumweni enkululekile kwaqinisa izwe ngezinga lezwe ngesikhathi senhlekelele yekhathuni le-2006, uhlelo oluhlelekile wenhlalonhle futhi, ngokusho kweThe Economist, okuncintisana kakhulu kwezentengiselwano. Yibeke phezulu ngegugu lesiko elicebile, eligcinwe kahle, kanye nomqondo odumile wokuklanywa nokwakhiwa, futhi unendawo eyodwa yamaholide ethokozisayo.
Sekukonke, umhlaba ugcotshwa imvelo yezolimo engenasisekelo, amahlathi, amachibi amancanyana, izindunduma ezibizayo nezimbumbulu. Futhi, kukhona ezinye izimilo ezisakazekile, ikakhulukazi eJutland. Indawo engasogwini ingahlukahluka, futhi ifaka amawa amhlophe aseMøn, amahlathi emfucumfucu nawadoti njengalawo aseduze naseSkagen (kufaka phakathi iRåbjerg Mile neRubjerg Knude), imiphetho yamaphethelo aseStevns nalawo aseBulbjerg nesiqhingi saseFur . EDenmark, izindawo ezinamadwala ezinqunywe kahle zingatholakala kuphela eBornholm nase-Ertholmene eseduze.
Olunye uphawu lwesiko laseDenmark njenganoma iyiphi ipheshana lezivakashi lizokutshela ukuthi yi- “Hygge”, oluhumusha lube lula noma oluhlwabusayo. UDanies uzoshesha ukuveza ukuthi lo mqondo oyingqayizivele waseDenmark. Kodwa-ke iqiniso, lithatha indawo evelele esikweni eliqhathaniswa namanye amazwe. I-Hygge imvamisa ifaka ekudleni okuphansi ekhaya izingxoxo ezinde ngaphezulu kokukhanyisa amakhandlela newayini elibomvu enkampanini yabangane nomndeni, kodwa igama lisetshenziselwa kabanzi ekuxhumaneni nomphakathi.
Enye into ebalulekile yesiko laseDenmark ukuhlakanipha okungaphansi nokuthobeka, okungavezi emaphethini wokuziphatha waseDenmark kuphela. Kubaluleke kakhulu futhi isici esibalulekile kumklamo odumile waseDenmark, ocacisa i-minimalism eqinile kanye nokusebenza ngokusebenza ngokweqile kwe-Flashiness.
AmaDani ayisigelekeqe sokushisekela izwe, kepha ngendlela ecashile, ephansi key. Bazokwamukela ngemfudumalo izivakashi futhi bakhombise izwe, abazigqaja ngokufanele, kepha noma yikuphi ukugxekwa - noma ngabe kwakha - ngeke kuthathwe kalula. Kodwa-ke, iningi lamaDani lizochitha amahora amaningi ngenjabulo ukukhombisa ukuthi unephutha kubhiya ngaphandle kokuba nobudlova. Ngenxa yezizathu ezifanayo, abantu bangaphandle ekuhlaleni isikhathi eside bangabukwa ngesilinganiso esithile sokusolwa, ngoba umphakathi ongahlali kahle uvame ukucatshangelwa njengesihluthulelo sempumelelo yaseDenmark. Uzozwa njalo abantu bakwamanye amazwe bekhononda ngengcindezelo engapheli yokuba Danish People futhi Party elwela ukungena kwamanye amazwe iDenmark Peoples Party ikubone ukuthandwa ngokuhamba kweminyaka, ithatha ama-20% amavoti okhethweni lwakamuva olwenza kube yiqembu lasePennsylvania i2nd .
IDenmark ivame ukunconywa ngokuthi ingelinye lamazwe aluhlaza kakhulu emhlabeni kepha ngaphandle kwamabhayisekili amahle, amaDannes ngamanye awanendaba nemvelo yize edumile. Njengakwezinye izinto eziningi, ubudlova bemvelo bubhekwa njengomthwalo wemfanelo ngokuhlanganyela. Ubuholi beSocial Democratic busebenzisa uchungechunge lwezinguquko, ikakhulukazi intela eluhlaza, phakathi kwe-1993-2001, okwenza umphakathi waseDenmark wonkana (ikakhulukazi ekukhiqizweni kwezimboni) ungomunye wamandla aphumelela kakhulu emhlabeni. Ngenxa yalokho, le nqubekela phambili kwezobuchwepheshe iye yaba yokuthekelisa enkulu kunazo zonke ezweni. Izibonelo zifaka ama-thermostats, ama-turbines omoya kanye nokufakwa kwekhaya. Ngenxa yalokhu, izinqubomgomo eziluhlaza zijabulela ukusekelwa okubanzi okungajwayelekile phakathi kwabantu nayo yonke inkimbinkimbi yezepolitiki. I-20% yemikhiqizo yamandla ivela kumandla angavuselelekayo, ikakhulukazi amandla omoya. Lokhu kwenziwa ukuthi kwenzeke ngemakethe ejwayelekile ye-Nordic energy kanye nezinsizakusebenza ezinkulu zamandla we-hydro eNorway naseSweden, ezingalawulwa kalula phezulu naphansi ukulinganisa ukukhiqizwa komoya okungathembekile.
Yonke le mibono eluhlaza inemiphumela embalwa ebonakalayo kubahambi:
Izikhwama zepulasitiki zibiza imali; engabuyiswa, ngakho-ke uze nesikhwama sezitolo eziyothenga.
Amathini namabhodlela anediphozithi, angabuyiselwa yonke indawo athengisa umkhiqizo awunikiweyo. Kungakho uzobona abanye abantu benze imali eyengeziwe noma “umsebenzi” wokuqoqa amabhodlela angenalutho.
Izindlu zangasese eziningi zinezinkinobho ezinesigamu futhi esigcwele.
Kukhona cishe intela eyi-100% kaphethiloli.
Ezifundeni eziningi udinga ukuhlunga imfucuza yakho ngeziqukathi ezimbili ezihlukile 'zebhayoloji' 'neziqhumayo'.
Amadolobha amakhulu eDenmark Copenhagen, Aarhus, Ribe, Roskilde ukuze kufundwe okuningi Izifunda zaseDenmark - amadolobha
Ulimi lukazwelonke lwaseDenmark yiDenmark, ilungu legatsha laseJalimane leqembu lezilimi zase-Indo-European, futhi kulowo mndeni, uyingxenye yeqembu laseNorth Germanic, le-East Norse.
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi eDenmark (eduze ne90% yabantu siyakhuluma, okwenza iDenmark ibe ngelinye lamazwe asebenza kahle kakhulu esiNgisini emhlabeni lapho isiNgisi kungeyona ulimi olusemthethweni), futhi iningi lamaDanes lisondele kakhulu emdabukeni.
Amabhishi - imikhosi yomculo - amapaki okuzijabulisa - ukudoba - ukuzingela - ukuhamba izintaba eDenmark
Uhlobo lwemali lukazwelonke yiDanish krone (DKK, ubuningi "kroner"). Ezitolo “zokuvakasha” ngaphezulu Copenhagen, futhi emaholidini endabuko asogwini ogwini lweJutland West Coast naseBornholm Island kuvame ukukhokhelwa ngo-Euro.
Cishe yonke imishini ngokungakhathalekile opharetha izokwamukela iDanish Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB kanye neChina UnionPay (CUP). Ngenkathi iningi labathengisi lamukela amakhadi wezezikweletu we- International kanye namakhadi okudonswa kwemali, iningi lisemukela i-Dankort yendawo. Cishe yonke indawo lapho ucelwa ukuthi usebenzise i-PIN-khodi nekhadi lakho, ngakho-ke uma lokhu akuyona into evamile ezweni lakho, khumbula ukucela eyodwa ebhange lakho ngaphambi kokuhamba ekhaya. Futhi qaphela ukuthi abathengisi abaningi bazongeza i-3% -4% transaction charge (kaningi ngaphandle kwesixwayiso) uma ukhokha ngekhadi lesikweletu lakwamanye amazwe.
Qaphela ukuthi imishini embalwa ngeke yamukele amakhodi we-PIN isikhathi eside kunezinhlamvu ze-4, ezingadala izinkinga kubasebenzisi basenyakatho ne-american noma abanye abasebenzisi base-Europe. Buza umabhalane osebenza emshinini uma wamukela amakhodi enamakhodi we-5 enamakhodi we-XNUMX ngaphambi kokuzama ukusebenzisa umshini. Ikhadi lakho linganqatshelwa noma lingangeni i-PIN uma lingahambelani.
Kufanele uqaphele ukuthi cishe yonke into eDenmark iyabiza. Konke ukuthengiswa kwabathengi kufaka phakathi intela yokuthengisa ye-25% (ama-Moms) kodwa amanani abonisiwe adingeka ngokusemthethweni ukufaka lokhu, ngakho-ke kuhlale kunjalo. Uma uqhamuka ngaphandle kwe-EU / Scandinavia ungabuyisela enye yentela yakho yokuthengisa lapho ushiya izwe.
Ngokwemvelo ukuthi yini ongayithenga ihlala inezici eziningi, futhi ezweni elibizayo njengeDenmark, futhi kuya ngokuya ngosayizi wephakethe lakho, kepha nazi iziphakamiso:
Izakhiwo zamehlo eziklanywe nguLindberg
I-Skagen design watche
I-Royal Copenhagen porcelain
Ama-elekthronikhi eBang & Olufsen
UGeorg Jensen isiliva ubucwebe
LEGO amathoyizi wokwakha izitini
Imimoya ye-Aalborg Akvavit
Izinketho ezidumile nezendabuko yilezi:
I-herring egayiwe, ithafa, curry, noma izinongo ezibomvu.
ILiver Paté Sandwich, cishe ithandwa kakhulu.
I-Stjerneskud, isaladi, eyodwa ethosiwe kanye ne-plaice fillet eyodwa, istrimp nemayonesi.
I-Røget ål og røræg, i-eel ebhemayo namaqanda aqhekeziwe
I-Pariserbøf, inyama yenkomo ephekiwe enqabile nge-capers, i-horseradish, u-anyanisi eluhlaza, kanye ne-isikhupha seqanda esingaphezulu.
Ama-dyrlægens natmad, isibindi sikaphayi, izingcezu zenyama ebunjiwe, izindandatho zika-anyanisi kanye ne-aspic (isibhakabhaka).
Inyama yenkomo, inyama eluhlaza ebunjiwe enommbila yasikwa nge-yolk yamaqanda eluhlaza, u-anyanisi, i-horseradish kanye ne-capers.
I-Flæskesteg, Izingcezu zezingulube ezosiwe ngeklabishi elibunjiwe.
I-Roastbeef, ene-remoulade, anyanisi othosiwe, i-horseradish.
I-kartoffel, amazambane asikiwe, utamatisi, u-anyanisi othosiwe crispy, nemayonesi.
I-Hakkebøf, ipani yokuthosa inyama yenkomo enamafutha anyanisi othosiwe, iqanda okuthosiwe kanye nokhukhamba.
Ama-Shrimps, uthola ingxenye enesandla nje se-shrimp ene-mayonesi encane.
Ost, Ushizi. Zama ushizi obudala obukhulu obunikezwe u-anyanisi eluhlaza, izikhupha zamaqanda ne-rum.
Ngaphandle kwezitolo ze-kebab ezimile nezindawo zokudla ze-pizza, ukudla eDenmark kungabiza kakhulu, kepha kuyizindleko ezibizayo. Ukuhamba kwendabuko kwaseDenmark kufaka phakathi izinto ezifana ne-herring ekhethiwe, uphizi othosiwe, nezinye izinto zasolwandle ezihlanganisiwe. Izitsha zenyama ezinosizi nazo zivame kakhulu, njengoba kubonakala ezintweni ezinjenge-frikadeller (ingulube kuphela noma ingulube kanye nama-veal wenyama amabhola agqotshwe yi-brown brown) kanye no-"stegt flæsk og persillesovs" (izingcezu zikakhokho wezingulube obukhulu obandwe yisigaxa sikakhilimu wepars). Ukudla okuningi kuhambisana nobhiya, kanye nokudubula kwama-aquavit noma ama-schnapps, noma lokhu kujatshulelwa ikakhulukazi lapho izivakashi sezidlulile. Ukuphuza kanye nokudla kuyakhuthazwa njengoba ukudla kuthuthukiswa yiziphuzo, okuphambene nalokho. Uma ufuna isidlo esisheshayo sokubamba ohambweni, zama inja yendabuko yaseDenmark eshisayo, ekhishwe ku-bun enezinto eziningi ezilungiselelwe, kufaka phakathi ukhukhamba, u-anyanisi noma othosiwe okuluhlaza kanye ne-ketchup, lwesinaphi kanye nokubuyisa (ukusungulwa kwesiDanishi yize kunjalo yegama lesiFulentshi, eliqukethe imayonesi kanye nokufakwa kweklabishi elibunjiwe ne-turmeric ngombala). Nge-dessert, zama noma u- “ris à l'amande” (irayisi idonsa ngama-alimondi nama-cherries, futhi igama lesiFulentshi elingahlobene ne-French cuisine) noma i-æbleskiver (amakhekhe amise okwenziwe ngebhola afanayo ukuthungwa kumaphakeji aseMelika, akhishwe ngojamu we-sitrobheli kanye ushukela oluyimpuphu), womabili atholakala ngoNovemba nangoDisemba kuphela. Ukuze uthole uswidi zama isikhwama se- “Superpiratos” (uswidi olushisayo welayisense nge-salmiakki).
Vikela izindawo zokuvakasha lapho kungatholakali amaDani, ukuthandwa ngabantu bendawo cishe kuyinkomba yekhwalithi.
Izindawo zokudlela ezihlinzeka ngezibonelo zokudla okwenziwa emazweni aphesheya zivamile, ikakhulukazi emadolobheni amakhulu, ikakhulukazi ezindaweni zokudlela zase-Italy, zaseTurkey nezaseShayina, yize kungatholakala nezindawo zokudlela zamaJaphani, amaNdiya kanye nezase-Ethiopia. Ikhwalithi ivame ukuphakama, njengoba umncintiswano ubukhali kakhulu ukuthi amabhizinisi asezingeni eliphansi akwazi ukusinda.
Isidlo sasemini sendabuko saseDenmark si-smørrebrød, amasangweji avulekile ngokuvamile kwesinkwa se-rye - inhlanzi ngaphandle kwe-herring, i-plaice ne-mackerel kuthunyelwa isinkwa esimhlophe, futhi izindawo zokudlela eziningi zikunikeza ukukhethwa kwezinkwa. AbakwaSmørrebrød abasebenza ngezikhathi ezikhethekile, ezindaweni zokudlela zasemini, noma ezithengwe ezitolo zokudla zasemini, bagcwele kakhulu kunemali yokuthenga nsuku zonke. Isinkwa se-rye saseDenmark (rugbrød) simnyama, simuncu kancane futhi sivame ukungabi namandla. Kuyisidingo sabo bonke abavakashi ukuzama.
Njengoba noma yimuphi umuntu wakwelinye izwe osechithe isikhathi ebuka amaDanes azokutshela, utshwala yindwangu ehlanganisa umphakathi waseDenmark ndawonye. Futhi lapho sebebusweni babo abafile ebusuku, ngokuzumayo banciphise, bakhululwe, futhi ngenkathi bedabukile, ngandlela-thile badlulisa i-morph baba yiqembu labantu abathandeka kakhulu eMhlabeni. Esikhundleni sobudlova obuhambisana nokuzitika ngotshwala kwenye indawo, ngoba kubukeka sengathi kufeza injongo ebaluleke kakhulu yezenhlalo, abomdabu bavuleka kakhulu, banobungane futhi banothando. Kuthatha isikhathi ukujwayela, kepha uma ufuna ukwakha izibopho nabakwaDani, nansi indlela oyenza ngayo - uNkulunkulu akusize uma ukhishwa inyumbazane. Lokhu futhi kusho ukuthi abakwaDan banokubekezelela okuphezulu kakhulu ngokuziphatha kotshwala, inqobo nje uma kwenzeka ngezimpelasonto. Phuza ingilazi noma ezimbili zewayini esidlweni phakathi neviki kuyinto ejwayelekile, kanye nama-20 pints ngobusuku bangoMgqibelo, bese ukhwela yonke indawo.
Awukho unyaka wokuphuza osemthethweni eDenmark, yize iminyaka yokuthenga esemthethweni ye-16 isebenza ezitolo nasezitolo ezinkulu, kanye ne-18 emigoqweni, kuma-discos nasezitolo zokudlela. Ukuphoqelelwa kwalokhu kubekelwa umkhawulo ngandlela thize ezitolo nasezitolo ezinkulu, kepha kuqinile emigoqweni nakuma-disco, njengoba inhlawulo ephezulu nokuchithwa kwelayisense kungangena kumthengisi. Umthengi akahlali ejeziswa, noma amanye ama-disco egcizelela inqubomgomo yokuzikhethela yokungazinikeli ekuphuzeni utshwala, lapho ungakhishwa khona uma ungabanjwa ngaphandle kobunikazi kanye nesiphuzo esinotshwala. Abanye bangathi ukubekezelela okudumile kweDenmark ngokuphuza utshwala kuyancipha ngenxa yemikhankaso yezempilo yakamuva ebhekise ekuphuzweni kotshwala phakathi kwamaDan. Njengombana uDanes osekhulile angavumi ukuthi uhulumeni aphazamisane nemikhuba yabo yokuphuza, icala lelo lidluliselwa ebusheni esikhundleni salokho, futhi iziphakamiso zokwenyusa iminyaka yokuthenga okusemthethweni zibe yi-18 sezibhalisiwe, kodwa kusamele zidlule ePhalamende, futhi kungenzeka futhi esikhathini esizayo esibonakalayo.
Ukuphuza utshwala esidlangalaleni kubhekwa njengento eyamukelekayo emphakathini eDenmark, futhi ukuphuza ubhiya esigcawini kuyinto ejwayelekile yokushisa kwesimo sezulu lapho, yize imithetho kamasipala yakhona iqhubeka nokunciphisa le nkululeko, ngoba ukuzitika ngotshwala kubhekwa njengento engeyinhle ngebhizinisi. Ukuvinjwa kokuphuza kuvame ukusayinwa, kepha akuhlonishwe futhi kugcizelelwe kuwo wonke umuntu. Kunoma ikuphi, qiniseka ukuthi uphuza okuphuza okuphakathi, ikakhulukazi ngesikhathi sasemini. Ukuphakama kakhulu kungakufaka emahoreni ambalwa ejele ngenxa yobuningi bomphakathi (awukho irekhodi elizogcinwa). Amaphoyisa amaningi azokucela ukuthi uhambe bese uya ekhaya.
Ubhiya waseDenmark uwumuthi othanda ubhiya. Indawo ethengisa utshwala enkulu kunazo zonke, iCarllsberg (nayo engumnikazi weTuborg), inikezela ngezinketho ezimbalwa, kanye ne “Christmas Christmas” emnandi emavikini e-6 aholela emaholide. Ezinye iziphuzo ezihlwabusayo zifaka i-Aquavit (Snaps) ne-Gløgg - isiphuzo sewayini esishisayo esidumile ngo-December. Ubhiya waseDenmark ukhawulelwa kubhiya we-lager (i-pilsner), enhle, kepha hhayi ehlukahlukene kakhulu. Kodwa-ke eminyakeni embalwa eyedlule abakwaDanes baba nentshisekelo kuhlu olubanzi lwamabhiya, futhi imikhiqizo emihle kakhulu yama-microbreweries aseDenmark iyatholakala. I-Danish Beer Enthusiasts igcina uhlu lwamabha nezindawo zokudlela ezikhethiwe kahle kukabhiya kanye nohlu lwezitolo ezikhethwe kahle.
Amanzi ompompi ayatholakala ngaphandle kokuthi akhonjiswe. Imithetho yokuthola amanzi ompompi eDenmark yaze yeqa leyo yamanzi asebhodleleni, ngakho-ke ungacasuki uma ubona oweta egcwalisa umsele wamanzi echibini. Izindawo zokudlela nezinye izindawo ezithengisa ukudla zivakashelwa njalo ngabahloli bezempilo futhi banikezwa amaphuzu nge-1-4 “smiley wadogo”. Izilinganiso kufanele zikhonjiswe ngokugqamile, ngakho-ke bhekisisa ubuso obujabule lapho ungabaza. Yize ukungcola emadolobheni amakhulu kungacasula kodwa akubeki ebungozini kubantu okungebona abahlali. Cishe wonke amabhishi alungele ukugeza - ngisho nezingxenye zechweba laseCopenhagen ezisanda kuvulwa ukugeza.
Ngokuya kwe-15 Agasti 2007, akukho emthethweni ukubhema kunoma yisiphi isikhala somphakathi ngaphakathi eDenmark. Lokhu kufaka phakathi: izakhiwo zikahulumeni ezinokufinyelela komphakathi (izibhedlela, amanyuvesi, njll), zonke izindawo zokudlela kanye nemigoqo emikhulu kune-40m2 nazo zonke izithuthi zomphakathi. Kufanele ube neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala ukuyothenga ugwayi eDenmark. Kusukela nge-1 Julayi 2014, ukubhema kuyenqatshelwa kwezobuchwepheshe kuzo zonke izingxenyekazi zikaloliwe eDenmark; kodwa-ke, umthetho awukaze usebenze, futhi bobabili abahambi nabasebenzi besitimela bangabonakala njalo bebhema endaweni yesikhulumi. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhumbula ukuthi akusemthetho - khipha ugwayi wakho uma ubuzwa ngabasebenzi; ngaphandle kokuthi ufuna ukukhahlelwa endawenikazi.
Ngenkathi amathofi e-Intanethi ekhona emadolobheni amakhulu, ngokuvamile awakhelwe izivakashi ngakho-ke angaba namaqhinga okuthola. Amahhotela ajwayele ukuhlinzeka nge-inthanethi engenantambo namakhompyutha ngokufinyelela ku-inthanethi, kepha noma ngabe le sevisi ihlinzekwa mahhala, iyahlukahluka kakhulu - amakhofi amaningi nemigoqo nakho kuhlinzeka nge-inthanethi engenantambo yamakhasimende akhokha, noma ngabe kungasayiniwanga, ngakho-ke kuhlale kukuhle umqondo wokubuza. Indlela elula yokuthola i-inthanethi imvamisa ilabhulali yomphakathi, njengoba kukhona cishe kuwo wonke amadolobhana, avame ukutholakala enkabeni, abhalwe kahle (funa iBibleotek) futhi ahlala ekhululekile - kungaba nesikhathi esincane sokulinda ukuthola mahhala ikhompyutha kodwa, kepha ngokujwayelekile kuzoba nohlobo oluthile lohlelo lokubhuka olukhona, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa isikhathi kangcono.
Ngenxa yezizathu ezingokomlando, iDenmark iyindawo ephakathi nendawo yokufinyelela esifundeni esijabulisayo seNyakatho ye-Atlantic, enezindiza eziqondile eziya nokubuya emadolobheni amaningana e-Iceland, e-Faroe Islands naseGreenland. AmaHirtshali eNorthwestern Jutland anezinsiza zesikebhe zamasonto onke eziya eTorshavn esiQhingini saseForte naseSeyðisfjörður e-Iceland. ILongyearbyen eSvalbard ingafinyelelwa emadolobheni amaningana, kanye noma kabili ngesonto nokumiswa okukodwa e-Oslo. Uma ungumuntu othanda isimo sezulu esibandayo namabhayisekili ke zizwe ukhululekile ukuhlola iDenmark.
Amatshe weJelling, Amatshe we-Runic neSonto
I-Christianfeld, iSonto laseMoravian Settlement
Indawo yokuzingela ephoqelele eNorth Zealand
Kujataa Greenland: Ukulima iNorse kanye ne-Inuit Edward ye-Ice Cap
I-Aasivissuit - iNipisat. Inuit Hunting Ground phakathi kwe-Ice noLwandle